on August 31, 2016 Related - Aung Thu Nyeen News Features
အစိုးရကျောင်းများမှာ နို့တိုက်ကျွေးရေး စီမံကိန်းရဲ့ ပင်မရည်ရွယ်ချက်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကို အစိုးရက ကူညီပေးတာပါပဲ၊ ဒေသထွက်နို့တွေအတွက် ရောင်းကုန်ဈေးကွက်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ ကလေးတွေကို ငယ် ရွယ်စဉ်ကတည်းက နို့တိုက်ကျွေးမယ်။ နောက်ပိုင်း နို့ကို အရသာပြင်ဆင်ပြီး လူကြီးတွေပါ နောက်ပိုင်းသောက်နိုင်အောင် ဈေးကွက်ရအောင် ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းတွေ နို့သောက်နှုန်း နည်းပါသေး တယ်။ ၁ နှစ်ကို ၂ လီတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲသည်ကနေ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ၁ နှစ်ကို လူ ၁ ယောက် ၂၃ လီတာ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ နို့ဈေးကွက်ကလည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းမှာ ၁ နှစ်ကို ၂၉၀ လီတာသန်းကနေ၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ၁၁၄၆ လီတာသန်းအထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွေမှာ ကျွဲနွားအုပ်ပမာဏကလည်း ၁၉၈၉ ခုနှစ် မှာ ၁၃၂,၀၀၀ ကောင်ကနေ၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ၄၁၂,၀၀၀ ကောင်အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရကျောင်းတွေက နို့ တိုက်ကျွေးမှုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ နို့ဈေးကွက်ရဲ့ ဝယ်လိုအား ၃၀% အထိကို ယူထားပါတယ်။ [အောက်ခြေမှတ်စု ၁ နှင့် ၂ တွင် ရှု --]
ဓာတ်ပုံ - ဘန်ကောက်ပို့စ်
Pico (Thailand) ရဲ့ အစီရင်ခံစာတခုအရ ထိုင်းနိုင်ငံက လေ့လာရေးစာအုပ်စာတမ်းတွေ (ဖတ်စာအုပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်များ အပါအဝင်) ရဲ့ ၇၀% ကို ပြင်ပပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေက ထုတ်လုပ်ကြပြီး၊ မိမိဘာသာ အရည်အသွေးအာမခံ စနစ် (Publisher's Self-assurance Category) နဲ့ ထုတ်တယ်ဆိုပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ ထုတ်ဝေသူက ဆရာများနဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ လူမှုဖူလုံရေးမြှင့်တင်ပေးရေး ကော်မရှင် (Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel) လက်အောက်က ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပုံနှိပ်တိုက်ကုမ္ပဏီ ၁၆-ခု က ထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လေ့လာချက်တခုအရ လေ့လာရေးစာအုပ်စာတန်း ၆၇၁ ခုကို စိစစ်ကြည့်ရာမှာ အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုထားတာ ၃၀% လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး ကုမ္ပဏီ တွေကလည်း ကျောင်းတွေဆီက အမှာရဖို့၊ ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ၊ အချက်အလက် အချို့ပြင်ဆင်၊ ပုံစံဟောင်းအတိုင်း ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေလိုက်ကြတာပဲလို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့ မေးခွန်းတွေ ပြင်ဆင်ထားတာ အားနည်း တယ်လို့ ထောက်ပြမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ [အောက်ခြေမှတ်စု ၃ တွင် ရှု --]
"ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေထွက်တယ်။ ပျော်နေတဲ့မိဘတွေ၊ ဂုဏ်ထူးမပါပေမယ့် အောင်လို့ ဝမ်းသာတဲ့မိဘ တွေလည်း FB မှာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူလတန်းကို ကျောင်းဝင်တဲ့ ၁ နှစ်ကျောင်းသား ၁.၁ သန်းမှာ ၃ သိန်းပဲ ဆယ်တန်း (Grade 11) ကို ရောက်တယ်။ အဲဒီထဲကမှ ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ပဲ ဆယ်တန်းအောင်တယ်။ (ဒါက ဘက်စုံပညာရေးကဏ္ဍ လေ့လာမှု CESR က တွေ့ရှိချက် ဖော်ပြထားတာ)။ ဒါကို ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသား ၁ သန်း လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ ခုနှစ်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းကလည်း ၃၇% လို့ ကြားရတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာက အထက်တန်းက ထွက်ရရင်လည်း အလုပ်ခွင် ဝင်လို့ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တဝက်ပျက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရ ကျောင်းထွက်လိုက်ရတာမျိုး၊ အခြားအကြောင်းနဲ့ ကျရှုံးနေတာ ရှိတောင် အရင်ရမှတ် Credit တွေကို ပြန်ကယ် နိုင်တဲ့စနစ်၊ နည်းပညာ/ သက်မွေး လက်တွေ့တွေပေါင်းပြီး အထက်တန်းကျောင်း ပြန်အောင်မြင်အောင် သွားနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ပေးတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသား ၁ သန်းအတွက်လည်း စဉ်းစားသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။"
ဒီလို စာသင်တန်းတွေမှာ ပင်မသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြီးနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ အထွေထွေဗဟုသုတ ၃၀% လောက်နဲ့ ဘဝသက် တာ ကျွမ်းကျင်မှု (Life skills)၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်နဲ့ ဝင်ငွေရရှိရေးကိုလည်း ထည့်သွင်း သင်ကြားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိမိကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကို ဘယ်လို စမလဲ၊ ဘယ်လိုစီမံအုပ်ချုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုလေး တွေပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်က မများလှပါဘူး။ ရာဂဏန်းလောက်ပဲ ကုန်ကျတယ်လို့ ဦးဝင်းမြင့် က ပြောပြပါတယ်။ အကယ်၍ ကောစောနော ပညာရေးက နေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လာရင်တော့ ရတ်ချဖတ် (Rajabhat Institute) လို့ခေါ်တဲ့ ရပ်ရွာရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျောင်းများ၊ ပွင့်လင်းတက္ကသိုလ် (Open University) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ရမ်ကမ်ဟန်တက္ကသိုလ် (Ramkamhaeng Open University)၊ ဆိုခိုထိုင်း ထမ္မထိရတ် ပွင့်လင်းတက္ကသိုလ် [Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand (STOU)] စတာတွေကို ဆက်တက်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးဌာနက အများသုံးစာကြည့်တိုက်များ (၈၄၇ ခု)၊ ရပ်ရွာ လေ့လာရေး စင်တာများ Community Learning Centres (၈၀၅၇ ခု)၊ သိပ္ပံဌာနဲ့ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား ပညာရေး ထုတ်လွှင့်ပေးမှု တွေလည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ [အောက်ခြေမှတ်စု ၄ တွင် ရှု --]
Dr. Issara Suwanabol, "School Milk Programme in Thailand", avialable online at
"Milking the system", Bangkok Post, 18/10/2015
Chularat Seangpassa, "Making textbooks more appealing better than spending millions onareading campaign", The Nation, August 29, 2016.
Wisanee Siltragool, "Thailand Non-formal education", UNESCO. 2007.